Abenzi baseChina abenziwe ngokwezifiso, Abahlinzeki, Ifektri - Ikhotheshini - Izesekeli ze-Angel Garment Co., Ltd.
Ikhaya > Inkinobho > Inkinobho yensimbi > Buckle
Ibhande bopha, elaziwa nangokuthi ibhande bopha, isikhumba ikhanda, okhalweni ikhanda, bopha, okokusebenza ngokuvamile kuyithusi emsulwa, i-zinc ingxubevange, insimbi, i-titanium ingxubevange, njll.
1. Isingeniso seIbhakede:
2. Amapharamitha womkhiqizo weBuckle:
Belt Buckle Abakhiqizi Isitolo esidayisa yonke impahla eshibhile ngokwezifisoFashion Men Metal Belt Buckle For Belt
nickle mahhala noma ngezifiso
ingubo / isikhwama / izicathulo / amabhande
ikhwalithi ephezulu, intengo eqondile yasefektri
kutholakala uma izindleko ezinamandla zihlinzekiwe
Isikhathi Sokulethwa Kwesampula
3-7days ngu-DHL / UPS / Fedex / TNT
100pcs, i-oda ngobuningi hhayi ngaphansi kuka-500RMB kwento ngayinye
Amaviki angu-1-2 ngomoya, ngolwandle noma ngokuhanjiswa kwe-combiantion
AMACEBISO: Ubukhulu bamakhasimende, imibala, izitayela konke kwamukelekile, njll. I-22ODM noma i-OEM iyatholakala. I-3.Mix oda yamukelekile.
Yini amakhasimende ayinakekelayo:
Ibhande lokugoqa ibhande lingahlukaniswa ngo-buckle wohlobo losuku, ibhande lohlobo lweqanda, ibhande eliyindilinga eliyindilinga, u-D wohlobo lwebhande lokugoqa, uhlobo lwesikwele sebhande, uhlobo lwendandatho yebhande, i-elliptical type belt buckle, eye eye belt buckle.
Imiyalo 3.Product kaBuckle:
4. Ukupakisha nokuhamba
Izinzuzo zomkhiqizo we-Buckle:
IBelt buckle inezinhlobonhlobo zezicelo, ezibandakanya okokugqoka, izikhwama, amabhande, amabhande, amaribhoni neminye imikhakha, kudlala indima yokuncipha nokubopha, ngoshintsho lweThe Times, kepha futhi yavela yaba ngenye yezinto zemfashini zokugqoka.
I-Q1: Ingabe uyinkampani yefektri noma yokuhweba?
A: Yebo, siyimboni, etholakala eDongguan, eGuangdongProvince waseChina.
I-Q2: Ungayamukela ngokwezifiso imikhiqizo yami yelogo?
A: Yebo, ama-pls athumela amasampula wakho woqobo noma imidwebo, bese sikhipha ikhanda ukuze uhlole imininingwane eminingi yemininingwane kanye nentengo engcono kakhulu, ukuthunyelwa, ukuhlelwa njll ngokufanele.
Q3: Ngingathola kanjani amasampuli?
A: Singahlinzeka ngemikhiqizo ekhona yesampula yokuhlola kwakho. Imvamisa nge-express, efana ne-DHL, i-Fedex, i-UPS, i-TNT njll.
I-Q4: Uzokhokhisa malini ngentuthuko entsha eyenziwe ngezifiso?
A: Okwe-OEM / into eyenziwe ngezifiso, isikhunta esisha siyadingeka ekukhiqizeni.
Imvamisa i-USD60 yedizayini, ye-buckle encike ekwakhiweni nosayizi. Kepha izindleko zesikhunta zingabuyiselwa imali lapho ama-oda aphelele e-qty engahlangana nonyaka owodwa.
Q5: Unganikeza ngamasampuli wamahhala?
A: Yebo, singanikeza amasampula wamahhala. Amasampula wangaphambi kokukhiqizwa nawo ayatholakala uma kunesidingo (kuqoqwe imithwalo) ukuze uyivume futhi uyihlole. Ama-oda azoqala uma esekutholile isiqinisekiso.
I-Q6: Izodingeka isikhathi esingakanani ukukhiqizwa?
A: Ngokuvamile izinsuku ezingu-7-10 ze-oda elincane elenziwe ngokwezifiso / i-OEM, nezinsuku eziyi-12-20 zokukhiqiza ngobuningi ngokusho kwe-qty yakho.
Q7: Iyiphi indlela yokuthumela?
A: Uku-oda okuncane, ukulethwa kwezwi lomhlaba jikelele, suchas DHL, UPS, DHL, Fedex njll.
Ku-oda elikhulu, ukulethwa ngomkhumbi noma ngomoya. Noma futhi kungahlukaniswa ngesicelo sakho.
I-Q8: Isikhathi sakho esihamba phambili?
A: Kwinto eyenziwe ngezifiso, isikhathi sethu esiholayo yizinsuku eziyi-12-15, futhi singakwazi ukuyicindezela futhi siyilethe ngokushesha
Inkinobho ye-Metal snap